पाशविक इतिहास बोकेको पुस्तक जसलाई हेरेर हुन्छ शल्यक्रिया - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ पाशविक इतिहास बोकेको पुस्तक जसलाई हेरेर हुन्छ शल्यक्रिया
पाशविक इतिहास बोकेको पुस्तक जसलाई हेरेर हुन्छ शल्यक्रिया
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ भदौ २ गते, १३:३४ मा प्रकाशित
स्नायु शल्य चिकित्शक डा. सुसन म्याकिनन शल्यक्रिया गर्नुअघि २०औं शताब्दीको एनोटोमी सम्बन्धि एउटा पुस्तक हेर्छिन । अमेरिकाको वासिंगटन युनिर्भसिटीकी डा. म्याकिनन मानव शरिरलाई पत्रै पत्रैमा देखाएको हातले कोरेको चित्रप्रति आभारी छिन् ।
शल्यक्रियापुर्व उनले अवलोकन गरेको तथा चित्रमा व्याख्या गरिएको पुस्तक पर्नकोप टोपोग्रयाफिक एनोटोमी अफ म्यान एनोटोमी क्षेत्रमा संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ । यसमा एनोटोमी सम्बन्धी विस्तृत र प्रष्ट तरिकाले सचित्र उल्लेख गरिएको छ ।
स्किन, मसल्स, टेन्डम, नर्भ, अर्गान र बोनलाई चित्रको माध्यमद्धारा व्याख्या गरिएको छ । तर, कमजोर मुटु भएकाले भने पुस्तक हेर्न सक्दैनन् ।
पुस्तक कालो इतिहासको एउटा अंश भएको आलोचकले आरोप लगाउदै आएका छन् । पुस्तकको पृष्ठभूमि सम्झदा डा. म्याकिननलाइ असहज लाग्छ । तर, पुस्तक नहेरी उनले आफ्नो काम गर्न सक्दिनन्
पर्नकप एटलास समेत भनिने पुस्तक प्रिन्ट भर्सनमा बाँकी छैन । यसलाई हजारौ पाउन्डमा केबल अनलाईनमा हेर्न सकिन्छ ।
नाजीले मारेका सयौ व्यक्तिको शब काटेर कोरिएका चित्र नै पुस्तकका सामाग्री हुन् । पुस्तकका प्राय पेजमा शरिरका विभिन्न अंगका टुक्राको चित्र देख्न सकिन्छ ।
पुस्तक कालो इतिहासको एउटा अंश भएको आलोचकले आरोप लगाउदै आएका छन् । पुस्तकको पृष्ठभूमि सम्झदा डा. म्याकिननलाइ असहज लाग्छ । तर, पुस्तक नहेरी उनले आफ्नो काम गर्न सक्दिनन् ।स्वास्थ्यसम्बन्धी कानूनका प्राध्यापक रबी जोसेफ पोलाक पुस्तक वास्तविक त्रासबाट सृजना भएको तर, यसलाई राम्रो कर्ममा उपयोग गर्न सकिने बताउछन् ।
पुस्तक अस्ट्रेलिायका प्रख्यात नाजी चिकित्सक इडवार्ड पर्नकोपको २० वर्षे परियोजना हो । सहकर्मीका अनुसार इडर्वाड अस्ट्रेलियाको नाजी पार्टी नेसनल सोसलिस्टका भक्त थिए । उनले काम गर्ने समयमा सधै नाजी पोसाक लगाउथे ।
युनिर्भसिटी अफ भियनाको मेडिकल स्कुलमा डिन बनेपछि उनले सो फ्याकल्टीका सम्पूर्ण यहुदीहरुलाई निस्काशन गरेका थिए । निस्काशन हुनेमा नोबेल पुरस्कार बिजेता पनि थिए ।
सन् १९३९ मा एउटा कानून बन्यो जसमा कैदमा मृत्युदण्ड पाएका कैदीको शबलाई नजिकैको एनोटोमी विभागमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लैजाने प्राबधान थियो । यो अवधिमा शबका भित्री तथा बाहिरी अंगलाई झिक्न तथा टुक्राउन पर्नकोपले घन्टौ काम गरेका थिए भने एउटा चित्रकारको समूहले उनको कितापका लागि चित्रहरु कोरेको थियो । कहिलेकाही त एनेटोमी विभाग यति भरिएको हुन्थ्यो की कैदीलाई मृत्युदण्ड समेत स्थगित गर्नुपथ्र्यो ।
हार्वड मेडिक स्कुलका डा. साबिन हिल्डब्रान्डका अनुसार पुस्तकमा भएका ८ सय तस्बिरहरुमध्ये आधा चित्र मृत्युदण्डको सजाँय पाएका राजनीतिक बन्दीको थियो । त्यसबाहेक, समलिंगी, जिप्सी, बिद्रोही र यहुदीको बारेमा हुन्थ्यो ।
सन् १९३७ मा प्रकाशित एटलासको प्रथम संस्करणमा इरिच लिपर र कार्ल इन्डट्रेसरले स्वस्तिका चिन्ह प्रयोग गरेका थिए । सन् १९६४ को दुई भागको अग्रेंजी संस्करणमा नाजी चिन्ह प्रयोग गरिएको थियो ।
अटलासका हजारौ कपिलाई विश्वभर विक्री गरिएको थियो । यसलई पाँच भाषामा अनुवाद गरिएको थियो । कितापको परिचयमा लेखिएको छ, ‘ चित्रद्धारा प्रभावकारी व्याख्या ’ । सन् १९९० को दशकपछि मात्र विद्यार्थी र प्राज्ञिकहरुले अटलासमा भएका सामाग्रीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
पुस्तकबारे पाशविक इतिहासको खुलासापछि सन् १९९४ देखि पुस्तक प्रकाशनमा छैन । पुस्तकालयमा एतिहासिक दस्ताबेजको लागि राखिनु बाहेक एटलास प्रयोगमा नआएको बेलायतको रोयल कलेज अफ सर्जनले जनाएको छ ।